‘स्काउटका गतिविधि सुस्त, समयमै ऐन संशोधन गर्न आवश्यक’
स्काउटरको योग्यता समयसापेक्ष गर्न जरुरी
| 2017-06-16 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं|| काठमाडौंको चावहिल स्थायी निवासी सुमन खड्का ‘सादा जीवन उच्च विचार’ राख्ने एक वरिष्ठ स्काउटर हुन् ।
विद्यार्थी जीवनमा नै स्काउटका साथीहरुको अतिरिक्त क्रियाकलाप देखेर प्रभावित बनेका खड्का विसं २०४५ सालमा ब्वायज स्काउटमा प्रवेश गरे ।
स्काउटका माध्यमबाट समाज सेवा गर्ने अठोट बोकेका खड्काले औपचारिक शिक्षा सहित स्काउटिङ शिक्षालाई पनि निरन्तरता दिँदै गए ।
गर्ल्स/ब्वायज स्काटउटमा सबैभन्दा उच्च मानिने तह किंस् व्याजसम्म पुगेका खड्काले नेपाल स्काउटमा नै जीवनको सबैभन्दा उर्जावान समयको करिब तीन दशक विताइसकेका छन् ।
स्नातकसम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका खड्काले स्काउटकै तालिमका क्रममा भारत, बंगलादेश समेत भ्रमण गरिसकेका छन् ।
उनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको तालिम लगायत किंस स्काउट लेभल अवार्ड(२०५२), गद्दी आरोहण रजक पदक (२०५३), वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक(२०५८) तथा नेस्नल स्काउट क्याम्प अवार्ड पदक (२०५७) बाट समेत सम्मानित भैसकेका छन् । उनै वरिष्ठ स्काउटर खड्कासँग नेपाल स्काउटका गतिविधि,चुनौती र आगामी दिनमा नेपाल स्काउटको भूमिकाका सन्दर्भमा निर्माण मिडियाले गरेको छलफलको सारसंक्षेप:
हिजोआज के कस्ता गतिविधिमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
जीवनको लामो समय स्काउट जीवनमा नै बिताएको छु त्यसैले अहिले पनि म स्काउटको गतिविधिमा सक्रिय छु । हाल म नेपाल स्काउटको क्षेत्रीय परिषद् सदस्य, जिल्ला परिषद् सदस्य हुँदै स्काउटका विभिन्न युनिटहरुमा स्काउट शिक्षकको रुपमा कार्यरत छु । अधिकांश समय स्काउटका गविधिमा नै बित्ने गरेका छन् ।
लामो समयदेखि स्काउटिङ शिक्षामा सक्रिय हुनुहुन्छ ? विगत र वर्तमानलाई तुलना गर्नुपर्दा स्काउटका गतिविधिमा कस्तो अन्तर पाउनु भएको छ ?
करिब तीन दशक भन्दा बढी समय मैले नेपाल स्काउटमा नै बिताएको छु त्यो पनि जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समय युवावस्था । स्काउटिङ जीवनमा प्रवेश गर्नुको मेरो मुख्य कारण नै स्काउटमा हुने गतिविधि थियो तर हिजो आज गतिविधिका हिसाबले नेपाल स्काउटमा गतिविधि निकै नै सुस्त छन् । जसले गर्दा नयाँ युवालाई नेपाल स्काउटमा सक्रिय बनाउन सकिएको छैन ।
स्काउट लिडरका लागि केही गतिविधि भए पनि सम्पूर्ण स्काउट युनिटलाई टार्गेट गरेर स्काउटका कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा एक स्काउट लिडरलाई स्काउटिङ शिक्षामा त्यति प्रोत्साहन मिलेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
स्काउटमा नयाँ युवालाई सक्रिय बनाउन सकिएन भन्नु भयो । अहिले संख्या र गुणात्मकताका हिसाबले नेपाल स्काउट कस्तो अवस्थामा छ ?
विगतको तुलनामा नेपाल स्काउटमा स्काउटको संख्या राम्रो नै मान्नुपर्छ । हाल ६० हजारको संख्यामा स्काउटहरु विभिन्न अनौपचारिक शिक्षामा संलग्न हुँदै आएका छन् । तर, स्काउट उत्पादन गर्ने स्काउटर वा लिडरहरु नै गुणात्मक हुन नसकेका कारण स्काउटको गुणस्तर दिनप्रति दिन खस्कदै गएको छ ।
एक जेन्स स्काउट मास्टरलाई दिइने तालिम र लेडिज स्काउट मास्टरलाई दिइने तालिमका विभिन्न करिकुलम नै समानस्तरको छैन जसले गर्दा लेडिज स्काउट मास्टरले विभिन्न ट्रुपमा गएर सहजै काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन नसकेको हो ।
अन्तराष्ट्रियस्तरको संस्था नेपाल स्काउट भएर पनि यसका विभिन्न करिकुलम समय सुहाउँदो छैन जसले गर्दा युवाको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
नेपाल स्काउटको करिकुलम नै समयानुकुल छैन भन्नुभयो कस्तो अन्तर पाउनुभएको छ तपाईंले विदेशका स्काउटर र नेपालका स्काउटरमा ?
साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । नेपालका स्काउटर र विदेशका स्काउटरमा मैले त आकास जमिनको फरक पाएको छु । विदेशमा स्काउट भनिसकेपछि राज्यले दिने सम्मान र स्काउटरले पाउने सेवा सुविधा पनि निक्र्योल गरिएको हुँदो रहेछ तर हाम्रोमा भने स्काउटरलाई आकर्षण गर्न कुनै त्यस्तो नीति नै ल्याइएको छैन । त्यसैले पनि होला नेपाल स्काउटमा प्रवेश गरेका नयाँ पुस्ताको आकर्षणको केन्द्र नेपाल स्काउट बन्न सकेको छैन ।
विदेशमा एक स्काउटले धेरै काम गर्न सक्छ तर नेपालमा भने स्काउटलाई त्यस्तो किसिमले योग्य बनाउन सकिएको छैन । मलाई त स्काउट भनेको ‘अल राउन्डर’ बन्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ जुन विदेशमा मैले देखेको छु । त्यसैले नेपालका स्काउटरहरुले पनि आफुलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
अहिले नेपाल स्काउटमा समयमा नै नेतृत्व परिवर्तन भएन । विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि नेपाल स्काउटका नेतृत्व रहे भनेर पनि केही साथीहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
पक्कै पनि, नेपाल स्काउटमा समयमा नै नेतृत्व परिवर्तन हुन नसकेकै हो । यसले स्काउटका हरेक क्रियाकलाप तथा गतिविधिलाई प्रभावित पार्दै आएको छ ।
तर यसको मुख्य कारण भनेको समयमा नै स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नु नै हो त्यसमा पनि नेपाल स्काउट ऐन र नियमावली समयमा नै संशोधन हुन नसक्नु नै हो ।
प्रष्ट नीति, नियम तथा ऐन नभएकै कारण पनि नेपाल स्काउटमा केही समस्या सिर्जना भएका छन् । अबको यो स्थानीय निर्वाचन पछि नेपाल स्काउटमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
शुक्रबार, २ असार, ०७४